Raharaha RN 2 Brickaville : Taorian’ny fisamborana azy, marary i Roméo | NewsMada
Raharaha RN 2 Brickaville : Taorian’ny fisamborana azy, marary i Roméo
Voalaza fa marary ilay rangahy iray antsoina hoe Roméo, voampanga ho atidohan’ireo mpitora-bato fiara any Brickaville. Mihevitra ny olona fa fomba efa mahazatra hatrany no miseho fa tsy maintsy lazaina fa marary ny olona iray mba hakana aina eny anivon’ny hopitaly sy hanaovana ketrika handosirana na koa hanafahana vonjimaika indray avy eo.
Raha ny alin’ny alarobia 29 novambra teo, voasambotra tao an-tokantranony Randrianandrasana Roméo Lucien, nambaran’ny mpitsabo iray nikarakara azy fa marary izy ny alin’ny zoma voalohan’ny volana desambra teo, ary naiditra hopitaly ao an-toerana
ihany. Raha ny loharanom-baovao, vokatry ny harerahan-tsaina amin’ny raharaha miandry azy ny olany.
Andaniny, nihevitra ny hitarika olona hirohotra eny amin’ny hopitaly ny fianakaviany, fa
saingy vokatry ny fifampiresahana tamin’ny kaomanda Randriamanantena Leon, kaomandin’ny kompania zandariamariam-pirenena Toamasina, nilamina izany fihetsika saika hitarika olona hanakorontana izany tao an-toerana. Nambaran’ ity manamboninahitra ity mantsy fa raharaham-pitsarana io ka tsy misy fifanarahana azo atao amin’ny zandary. Andaniny kosa mbola mitohy ny fikarohana an-dRamatoa Carolle.